Manotra indray ny C.U.A ry reto a! | GAZETY_ADALADALA
Manotra indray ny C.U.A ry reto a!
Posted on 14/02/2011 by gazetyavylavitra
Rehefa misy ny tsy mety ataon’ny zanaka dia voatonona foana ny hoe ‘ mba zanak’iza ary itony? »
Aza gaga araka izany raha tonga dia ny C.U.A no voasoratra ery amin’ny lohateny satria androany maraina dia nisy saonjo iray namarara tamin’ireto zanany .
Tamin’ny herinandro lasa dia nadio ny sisin-dàlan’Antaninarenina (tsy hoe nadio tanteraka anefa fa nisy ihany teny antsefantsefany teny). Voaroaka niala teny mantsy ireo mpivarotra amoron-dàlana. Ary dia nihevitra ny maro fa hoe noho ny fankalazàna ny 07 Febroary no nahatonga an’izany. Nitohy andro vitsy taty aoriana anefa ilay izy. Saingy….Saingy…
Androany maraina raha niverina nandalo teny ny tena (tokony ho tamin’ny 11 ora 15 mn) dia zendana sy ketraka. Tsy handeha mihitsy ity fampiharana lalàna ity raha be saonjo mamarara toy ilay zalahy tratrako androany izay no iainana any anaty biraon’ny C.U.A any. Aza hitako anie izany.
Avy aty amin’ny EDBM nankany amin’ny BOA nandroso sy niverina (an-tongotra) ny diako. Inty lehilahy iray, mpiasan’ny C.U.A, manao ny satroka (kasikety) misy soratra C.U.A amin’ny hidiny, tenisy manga sy fotsy, akanjo bà misy soratra POLICE DES MARCHES ao an-damosina, ary eo amin’ny tanan’akanjo havia misy ny laharana 86.
Vao lavitra dia efa nifampiteny ireto roalahy mpivarotra DC amoron-dalana manakaiky ny BOA
Miala any ary ny an’ialahy. Iny !
Dia tonga ranamana nolazaina etsy ambony. Satria be olona nijery CD teo dia mba nahalala nihataka kely ihany ranamana ka niankina tamin’ny fiara iray tsy lavitra teo. Ireto mpivarotra CD kosa rehefa avy nifampiresaka mangina taminy dia nihataka nanakalo vola madinika ny iray, no sady nampilaza ilay namany iray mpivarotra vatomamy sy sigara tsy lavitra azy teo…
Tsy niala lavitra aho ary tsy niafina rahateo koa fa nataoko hitan’ilay ranamana tsara fa izy no arahako maso.
Somary niahotra ihany ranamana na hanohy na tsia, hidina mankaty akaikin’ny Mampiely Baiboly.
Rehefa tonga teo amin’ireo mpivarotra akanjo bà anaty sobika ranamana, teo amin’ilay ramatoa mpivarotra eo akaikin’ny trano fanasàna sary eo, dia efa naha omana ny anjarany ny teo, ary dia ny niankina nandry ny vola sisa no nataony.
Tonga tety amin’ny Mampiely Baiboly ihany nony farany…Dia niankina teo ami’ny fiara nanoloana teo indray ranamana niandry ireo mpivarotra nanodidina teo, satria tsy maintsy mbola nitady madinika indray ny rehetra.
Asa re! Tsy nandray karama am-bolana maro va re ilay ranamana iny ka ny mpivarotra no avela tsy hanara-dalàna mba hanavotana ny faran’ny volana tsy maintsy boriboriana e? Sa dia efa tandra vadin-koditra ao amin’ny C.U.A ao ny tsy maintsy manotra?
Fanavaozam-baovao 17 Febroary 2011 : Nandalo teo Antaninanarenina ny tena io maraina io (17 Feb 2011) ary dia nahita fa madio ny sisin-dàlana. Misy mpiasan’ny fivondronana roa tsinjoko eo. Ny miakanjo ny akanjoba mitondra ny laharana 151 dia mitsatoka eo anelanelan’ny Mampiely baiboly sy ny BFV/SG, ary ny miaknjo ny 110 kosa dia ery akaikin’ny tranoben’ny EDBM. Ireo mpivarotra indray dia milanja ny entany manao fangalam-piery amin’ilay lalana midina mankany Antsahavola iny. Enga anie hitohy ny fandraisana andraikitra tahaka izao, mba tsy hiverenan’iry hadalana natrehi-maso tery ambony iry.
Raha mandà izay voalaza etsy ilay ranamana voatifitra eto io, dia afaka mifandray amiko ny C.U.A hifanatrehako aminy. Na tsy nitondra fitaovana fandraketana an-tsary aza aho dia tadidiko hatramin’ny endriny, amin’izato izy ranjanana sy mijehanjehana amin’ny ecouteurs tsy miala eny an-tsofina sy ilay laharana 86 (izay inoako fa misy fandraisana an’ireny any amin’ny birao any hoe iza no naka ny akanjo mitondra laharana toy izao , na toy izatsy). Efa nisy toy io koa tsikaritro teny anoloan’ny P.M.U Soarano, raha iny izaho nijoro teo akaikin’ny iray tamin’ireo mpivarotra amoron-dalana ireo.
Ho tonga anie ny tena fampiharana marina ny lalàna, ka mba tsy ho anio hafa no lazaina, rahampitso hafa no atao!
Filed under: anao ny fitenenana, fiaraha-monina, tapatapany, tontolon'ny asa | Tagged: Antaninarenina, BOA, CUA, EDBM, manotra, Soarano |
« Antananarivo Miblaogy 7 – HdO Le Bus Antanimena CNEAGR Nanisana: tsy milamina mihitsy »